Olee otú Naghachi Data si Draịvụ na Bad Ndi
1.8 exFAT Iweghachite
2 Naghachi data si dị iche iche na usoro / ngwaọrụ
2.1 Linux Draịvụ Iweghachite
2.2 laptọọpụ Data Recovery
Ma gụọ 2.3 nkebi Iweghachite
2.4 Seagate mpụga ike mbanye Iweghachite
2.5 WD My Passport Iweghachite
2.6 WD mpụga ike mbanye File Iweghachite
2.7 Lacie diski ike Data Recovery
2.8 WD mmewere Data Recovery
2.9 Freecom mpụga ike mbanye Iweghachite
2,10 Buffalo mpụga ike mbanye Iweghachite
2,11 G-Technology mpụga ike mbanye Iweghachite
2.12 Dell Draịvụ Data Recovery
2,13 Fantom mpụga ike mbanye Data Recovery
2,14 Acomdata Draịvụ Data Recovery
2,15 Fujitsu Draịvụ Data Recovery
3 Operations ịzọpụta diski ike gị
3.1 diski ike idozi
3.2 mmepụta oyiri ike mbanye
3.3 Hichapụ ike mbanye
3.4 Idozi ike mbanye
3.5 Dochie ike mbanye
3.6 Unformat Draịvụ
3.7 Iji ike mbanye mgbake nkebi
3.8 Obodo ike mbanye mgbake ọrụ
3.9 Ike mbanye mgbake ngwaọrụ
3,10 Top ike mbanye mgbake software
3,11 Ike mbanye paswọọdụ mgbake
4 Naghachi data si Mac OS
4.1 Iweghachite HD
4.2 Mac Draịvụ Iweghachite
4.3 MacBook Pro Draịvụ Iweghachite
4.4 iMac Draịvụ Iweghachite
5 nsogbu na draịvụ ike
5.1 Ike mbanye ọdịda
5.2 Ike mbanye okuku
5.3 mebiri emebi ike mbanye
5.4 formatted ike mbanye
5.5 Naghachi data ọjọọ sectors
5.6 Uninitialized ike mbanye
Enwere m ike Naghachi faịlụ site Draịvụ na Bad Ndi?
Naghachi Data si Draịvụ na Bad Ndi na 3 Nzọụkwụ
Ndewo, m nwere ihe 80GB Hitachi mpụga ike mbanye. Taa, mgbe m jikọtara ya na kọmputa m, m nwetara ihe njehie ozi "njehie 123 ike na-agụ oru 1". M ike ịnweta m ike mbanye kemgbe ahụ. My ndụ data bụ na mbanye na m chọrọ m data azụ. Biko, gwa m otú m nwere ike naputa m niile data. Daalụ nke ukwuu.
Ozugbo draịvụ ike gị na ahụ mebiri emebi ma ọ bụ agbajikwa, Ohere inweta n'ihi na ị na gbapụta gị faịlụ ndị bụ obere. Ma, e nwere ihe ngwọta n'ihi na ị na-agbake data si ike mbanye na ọjọọ sectors ma ọ bụrụ na ike mbanye bụ naanị emerụ. The emerụ ike mbanye pụtara na e nwere usoro njehie na gị mbanye na faịlụ ndị dị nnọọ keerughi. Na a ike mbanye ọjọọ oru data mgbake omume, gị data nwere ike Ewepụtara mfe.
Wondershare Data Recovery, Ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac dị otú ahụ a trustful ngwá ọrụ gị iji naghachi data si ike mbanye na ọjọọ ndi. Ọ bụ ike naghachi niile partitions si draịvụ ike gị. The ike mgbake atụmatụ nke usoro ihe omume na-enyere gị iji weghachi a nnukwu ego nke faịlụ na ụdị, gụnyere oyiyi, videos, akwụkwọ faịlụ, ọdịyo faịlụ, wdg wezụga ya, ọ bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na kọmputa ike mbanye na mbughari ike draịva.
Download a ikpe mbipute iji weghachite data si ike mbanye na ọjọọ sectors ugbu a.
3 Iweghachite ụdịdị-enyere gị aka naghachi furu efu faịlụ n'okpuru ọnọdụ dịgasị iche iche
Na-akwado data mgbake si egweri biini, ike mbanye, na kaadị ebe nchekwa, flash mbanye, dijitalụ igwefoto na camcoders
Akwado os: Windows 10/8/7 / XP / Vista, Mac OS X (Mac OS X 10.6, 10.7 na 10,8, 10,9, 10.10 Yosemite) on iMac, MacBook, Mac Pro wdg
Cheta na: Lost data na draịvụ ike gị na ihe ọjọọ sectors nwere ike overwritten mfe, i kwesịrị ịkwụsị na-na draịvụ ike maka ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na ị chọrọ iji naputa niile furu efu faịlụ. Ọzọkwa, biko adịghị wụnye ihe omume na draịvụ ike na ihe ọjọọ ndi.
Nzọụkwụ 1 Họrọ a mgbake mode na-amalite ike mbanye na ọjọọ sectors data mgbake
Ma nsụgharị nke usoro ihe omume nwere yiri mgbake arụmọrụ, na Aga m gosi gị otú ị hazie mgbake na Windows version nke Wondershare Data Recovery.
Dị nnọọ ka n'okpuru image na-egosi, mgbe launching usoro ihe omume gị na Windows kọmputa, ị ga-enweta a window na 3 mgbake ụdịdị.
Ka họrọ "nkebi Iweghachite" naghachi weghachite data si ike mbanye na ọjọọ ndi.
Nzọụkwụ 2 iṅomi nkebi na draịvụ ike gị na ihe ọjọọ ndi.
Na nke a nzọụkwụ, ị ga mkpa iji họrọ ike mbanye na ọjọọ sectors ke window.
Mgbe ahụ mkpa ka ị họrọ nkebi na na draịvụ ike na pịa "Malite" button na-amalite na-achọ furu efu faịlụ na ya.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị na-aga na-agbake data site na mpụga ike mbanye na ọjọọ ndi, biko hụ na ọ ga-ghọtara site na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 3 Naghachi faịlụ site na draịvụ ike na ihe ọjọọ sectors
Mgbe scanning, faịlụ na draịvụ ike gị si nkebi ga-egosipụta na mmemme window. Ị nwere ike ele mbụ nchekwa aha ma ọ bụ faịlụ aha ego otú ọtụtụ nke faịlụ na na draịvụ ike na ihe ọjọọ sectors nwere ike agbapụtawo.
Na ọgwụgwụ, ị nwere ike nye akara faịlụ na nchekwa gị mkpa ma pịa "Naghachi" na-azọpụta ha gị na kọmputa.
Cheta na: Iji gbochie natara data si na-overwritten, ị nwere ike ghara ịnọgide na-faịlụ na mbụ ike mbanye na ọjọọ ndi.
Idozi ike mbanye na ọjọọ sectors
N'ezie, e nwere ihe ngwọta idozi draịvụ ike gị na ihe ọjọọ ma ọ bụrụ na sectors mbanye na-adịghị mebiri emebi. I nwere ike ịgụ otú ndozi Bad Ndi on Draịvụ na-eji Wondershare Liveboot 2012 iji dozie nsogbu a. Ma tupu i idozi usoro ihe omume, ị ga-mma naghachi data site na ya apụ.
Windows Vista undelete: Olee otú undelete Files na Windows Vista
Olee otú Naghachi ehichapụ faịlụ site na Windows 7
Olee otú Idozi SD Kaadị bụghị formatted Error
Ike mbanye Ga-buut (Windows 7, XP ma ọ bụ Vista)
Olee otú Unformat A Draịvụ na Windows ma ọ bụ Mac
Top 10 Draịvụ Iweghachite Services
Top 5 wakporo Draịvụ Data Recovery Software
Olee otú Naghachi Data si Raw Draịvụ
Olee otú akwagakwa OS ka New Draịvụ enweghị reinstalling
Olee otú naghachi faịlụ si jiri mpụga ike mbanye
Olee otú Naghachi Data si SATA Draịvụ
> Resource> Draịvụ> Olee naghachi Data si Draịvụ na Bad Ndi